नौ अर्बको भ्रष्टाचार, बाबुरामको ‘स्टन्ट’ कि वास्तविकता?
धैर्यकान्त दत्त काठमाडौं - शुक्रबार, असोज ३०, २०७७
जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले वर्तमान प्रधानमन्त्रीसहित दुईजना पूर्वप्रधानमन्त्री मिलेर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोयोजनामा ९ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको टिप्पणीले ठूलो चर्चा पाएको छ।
केही दिनअघि गृहजिल्ला गोरखा पुगेको बेला एक राजनीतिक कार्यक्रममा भट्टराईले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मिलेर विद्युत आयोजनामा ९ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरेका थिए।
भट्टराईले गरेको दाबी अनुसन्धान र छानबिनबाट मात्रै निक्र्योल हुनसक्ने विषय हो। तर, राजनीतिमा ‘स्टन्ट’ भन्ने कुराले ठूलै स्थान पाएको छ।
मुख्य विषयवस्तुबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न, आफ्नो कमीकमजोरी लुकाउन, चर्चामा रहिरहन राजनीतिज्ञहरूले विभिन्न खाले ‘स्टन्ट’ भन्ने अस्त्र प्रयोग गर्नु नयाँ कुरा होइन।
हालसालै फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री सान्ना मरिनको भित्री बस्त्र (ब्रा) नलगाइकन निकै तलसम्मको ‘नेकलाइन’ भएको लुगा लगाएर ‘क्लिभेज’ देखाउँदै खिचाएको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ।
कतिपयले प्रधानमन्त्री पदका लागि यस्तो व्यवहार उपयुक्त नभएको भनी उनको आलोचना गरे। तर, कतिपय उनको समर्थनमा उत्रेर उस्तै किसिमको फोटो खिचाएर सार्वजनिक गरे।
फिनल्यान्डकी प्रधानमनत्री मरिनले ‘ट्रेन्डी’ नामक एक फेसन पत्रिकाका लागि ‘बोल्ड’ तस्बिर खिचाएकी थिइन्। उनको त्यो फोटो ‘स्टन्ट’पछि सकारात्मक र नकारात्मक आलोचना हुनु स्वाभाविक नै थियो । तर, त्यो फोटो सुटपछि राम्रै चर्चा पाइन् मरिनले।
देखिने, सुनिने र चर्चामा रहिरहनु मानवीय स्वभाव नै हो। झन् राजनीतिमा यो सूत्र अलि बढी नै प्रयोग हुन्छ।
र, यसका लागि राजनीतिकर्मीहरूले बेलाबेला स्टन्ट गरिरहन्छन्।
नायक बन्न पनि स्टन्ट त गर्नुपरिहाल्यो। चलचित्रमा एकजना कलाकारलाई नायक बनाउन कति धेरै ‘स्टन्टम्यान’ प्रयोग गरिएको हुन्छ। अरूकै साहसको बलमा नायक बन्नेहरूको ‘फिल्मी’ दुनियाँमा कमी छैन।
तर, ‘फिल्मी’ दुनियाँ जस्तो स्टन्ट राजनीतिमा टिकाउ हुँदैन। खासगरी २१औं
शताब्दीको राजनीतिमा। संसार ‘डिजिटलाइज्ड’ भइसकेको छ। सबैको हातहातमा ‘स्मार्ट’ फोन पुगिसकेको छ।
सञ्चार प्रवाहको दर यति तीव्र भइसकेको छ कि हजारौं कोस टाढा अमेरिकामा घटेको घटनाको जानकारी नेपालसम्म पुग्न पाँच मिनेट पनि लाग्दैन। त्यसैले अहिलेको राजनीतिमा झुटा स्टन्ट चर्चा बन्न सक्दछ। तर, भरपर्दो नहुन सक्छ।
९ अर्ब भ्रष्टाचारसम्बन्धी टिप्पणीपछि भट्टराई अहिले आरोपित दलका तर्फबाट घेराबन्दीमा परेका छन्। भट्टराईलाई कांग्रेस र नेकपाले मात्रै होइन, अन्य दलका नेताले पनि प्रमाण पेस गर्न चुनौति दिन थालेका छन्।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपविरुद्ध कांग्रेस र नेकपाले प्रतिवाद गर्नुलाई स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ। आफ्नो शीर्ष नेतृत्वको बचाउ गर्नु उसको दायित्व हुन्छ।
तर, पछिल्लोपटक राप्रपा अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले समेत भट्टराईलाई घेरेका छन्। लोहनीले भ्रष्टाचारको प्रमाण रहेको भन्ने पूर्वप्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्नुभन्दा सम्बन्धित निकायमा बुझाइ दिन सुझाव दिएका छन्।
साथै उनले, यदि भट्टराईको आरोप झुटो हो भने आरोपित वर्तमान प्रधानमन्त्रीसहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई मानहानीको मुद्दा हाल्न चुनौति दिएका छन्।
तर, पछिल्लो वाकयुद्धमा भट्टराई एक्लिएको जस्तो देखिन्छन्। बचाउ वा बल दिन उनको पार्टी जसपाको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक बयान सार्वजनिक भइसकेको छैन्। भट्टराई अझै यो लडाइँ एक्लै लडिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले भट्टराईको त्यो आरोपलाई निराधार बताएका छन्। ६५औं प्रहरी दिवसका अवसरमा शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भट्टराईको नाम नलिई, ‘केहीले गैरजिम्मेवार तरिकाले बोलेका छन्। कामै सुरु नभएको आयोजनामा भ्रष्टाचार भयो भन्ने अभिव्यक्ति निराधार र गैरजिम्मेवार छ,’ भने। शून्य सहनशीलता सरकारको प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शून्य सहनशीलताको कुरा गरेको केही बेर नबित्दै पूर्वप्रधामन्त्री भट्टराईले निष्पक्ष छानबिन गर्न सुझाव दिइहाले।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘ट्याग’ गरेर भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा भनेका छन्, ‘भ्रष्टाचारप्रति साँच्चै शून्य सहनशीलता हो भने बुढीगण्डकी, एनसेल, वाइडबडी, सुरक्षा प्रेस, यती, ओम्नीलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणको उच्चस्तरीय–निष्पक्ष छानबिन गर्न कसले रोकेको हो त? कुराले हैन काम गरेर देखाउनोस्। नत्र ढाँटको कुरा खाई पत्याउनु....।’
तर, ९ अर्ब भ्रष्टाचार भएको प्रमाण आफूसँग रहेको दाबी गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले अख्तियारजस्ता सम्बन्धित निकायमा किन पेस गरेका छैनन्? प्रमाण दिए छानबिन भएर दोषी कारबाहीको दायरामा आउने सबैलाई लागेको छ।
नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि भट्टराईलाई प्रमाण पेस गर्न चुनौति दिँदै दोषी ठहरिए आफ्ना नेताहरू सजायको भागी हुने बताइसकेका छन्।
यहाँसम्म कि कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले बुढीगण्डकीमात्र होइन भट्टराईले भनिरहे जस्तै वाइडबडी, ओम्नी, बालुवाटार, प्रिन्टिङ प्रेस, गोकर्ण रिसोर्टका साथै लडाकु रासनसमेतको छानबिन गर्न र कडा कारबाहीका लागि सार्वजनिक दबाब बढाउन आह्वान गरिसकेका छन्।
तर, पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले ९ अर्ब भ्रष्टाचार भएको प्रमाण आफूसँग सुरक्षित रहेको र छानबिनमा सहयोग गर्ने बताउँदै आइरहेका छन्। साथै उनले छानबिनका लागि अधिकारसम्पन्न जनलोकपालको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
भ्रष्टाचारविरुद्ध अहिले निर्माण गरिएका सयन्त्र कमजोर रहेको उनको भनाइ छ। जनलोकपाल बन्ला, नबन्ला ठेगान छैन। तर, सुरु नै हुन नसकेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा कहाँ र कसरी भ्रष्टाचार भयो प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले प्रश्न गरेका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले यथेष्ठ प्रमाण पेस गर्न सके ठूला भ्रष्टाचार काण्डको आरोप लागेका ठूला राजनीतिज्ञहरू सम्भवतः पहिलोपटक दोषी ठहरिने छन्।
अन्यथा, भट्टराईको पछिल्लो अभिव्यक्ति लोकप्रियता हासिल गर्न फगत एक राजनीतिक ‘स्टन्ट’ बाहेक अरू केही हुन्नँ।
तर, वास्तवमै भ्रष्टाचारको प्रमाण छ भने पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले कमसेकम आमजनतामाझ सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ३०, २०७७